Wacaal Darey ah: Madaxtooyada Puntland oo Isugu yeertay Suxufiyiinta. – Radio Daljir
Febraayo 7, 2020 10:22 b 0
Inta badan Saxaafadda ka howl gasha magaalada Bosaso ayaa looga yeeray madaxtooyada magaalada, si ay u baahiyaan hadal uu jeedinayo madaxweyne Dr.Saciid Cabullaahi Deni oo Bosaso ku sugan.
Madaxweynaha Puntland Dr.Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadli doona sida la sheegay arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafka xoogan ee u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Radio Daljir ayaa ogaatay sababta loo xirey xafiiska Guddiga Doorashooyinka heer federaal ee Puntland in uu la xiriiro fariin ka baxdey telefishanka Dowladda Puntland, fariintaasi oo la xiriirtey arrimaha doorashooyinka Qaranka.
Guddiga madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, ayaa deeq bixiyaashu ku siiyaan dhaqaale badan sida Soomaaliya looga hirgelin lahaa doorashooyin dadweynuhu ka qayb qaataan, waxaana ka mid ah shaqooyinkooda wacyi gelin.
Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa xafiisyo ku leh dhammaan Dowlad Goboleedyada dalka.
Xiriirka Puntland iyo Dowladda federaalka ayaa maraya heerkiisi ugu xumaa, waxaana arintan imaaneysa iyada oo dhawaan dalku isu diyaarinayo doorasho aan la aqoon caynka ay noqon doono.
Si kastaba ha ahaatee shacabka Puntland ayaa dhegta u taagaya hadalka uu jeedin doono madaxweyne Deni, hadal jeedintaasi oo si rasmi ah uga bilaawaan doonto madaxtooyada Bosaso 5:00pm ee galabnimo.
Xasan Heykal, Daljir Boosaaso.